Saar Uskag Ilkaha | Way Best inay Guide Ilkaha caddeeya aanu u caddayn
Posts tagged "Saar Uskag Ilkaha"
Helitaanka ilkaha cad sida ay suurto gal u noqon karaan kuwo qaali ah oo waqti lumis. Waxaa jira siyaabo badan oo ay ku caddeeya aanu u caddayn ilkaha. Isticmaalka talooyinkan ku caawin kara ilko caddeeya in fashion sahlan.
Waxa ugu horreeya ee ay tahay inaad samayso si aad u caddayn ilkaha waa in si joogto ah ay dhigtaan nadiifinta ilkaha. Hubi in aad dhowra ballamada nadiifinta qabtaa labadii sanaba mar la ilkaha. Waxay noqon kartaa halkii fudud in kaliya ha u gudbin by hal maalin iyo qorsheeyaan on yaabee jeer cadayashada sida berri adag, laakiin taasi waa wax marna waa in aad samayn. Yaanay mar simbiriirixan iyo aad tahay badan tahay in ay ku dhicin caado iyo tag back to square mid xaq.
TALO! Hubi in aad ka fogaato kafeega, khamriga iyo sigaarka. waxyaabaha ku jira kiimikada mugdi ah in wasakheeyey ilkaha.
Waxaa la soo bandhigay si joogta ah in qiiqa sigaarka discolors ilkaha.
Way fududahay si aad u hesho ilko caddeeyo strips, oo iyagu waa arrin aan qaali ahayn. Si fudud u meel strip ku ilkaha for xaddiga waqtiga la siiyey tilmaamaha, iyo ilkaha Nuuri. strips waxay u muuqdaan in ay bixiyaan natiijada saboolka ah, oo intay u noqon mid aad loo jecel isticmaalo, iyagu ma waxaa iibsaday sida badan by macaamiisha.
TALO! Ka dib marka aad cunin cunto ama cabbaan sharaabka ah, waa inaad isla markiiba u isticmaalaan biyo ah si ay raaci baxay afkaaga. Tani waxay kaa caawin doonaa hadhay ka soo xayd ilkaha sii.
Floss iyo cadaydo ilkahaaga ugu yaraan laba jeer maalin kasta. Tani waxay kaa caawinaysaa in aad dagaalamaan huurada ka hor inta dhisi kartaa oo waxaad ka samaysaa ilkaha eegi wiswis iyo discolored. Halkii jidaynayey huurada si on ilkaha fadhiisan habeenkii oo dhan, cadaydo iyo ka hor wakhtiga jiifka xadhigga.
TALO! Caddeeya aanu u caddayn ilkaha si dabiici ah la strawberries. Jordgubbe ayaa lagu yaqaan in ay soo saaraan ilkaha cad.
Waxaa kugu dhici karo dareen ah in ilkaha qaar ka mid ah waxyaabaha la caddeeyo soo saari karaan. Waxa ay noqon karaan kuwo xanuun badan oo laga yaabaa in waqti gaaban laakiin weli xanuun. Haddii aad qabto dareen this, booqo dhakhtarkaaga ilkaha ka hor inta aadan sii wadi in la isticmaalo wax soo saarka caddeeyo. Wuxuu ku talin karaa ka soo baxay in uusan jidkiisa in saameyn doonaa ilkaha.
Hel ah jeeg-up ka dhakhtarka ilkaha si loo xaqiijiyo in ay ammaan tahay inaad caddayn ilkaha. Ha ku dhumin waqti aad iyo lacag isku dayaya baxay kasta oo alaabta guriga la caddeeyo. Hallayso khibrad dhakhtarkaaga ilkaha waa hab fog wax ku ool ah la helo wax soo saarka ah in adiga kuu fiican.
TALO! Cabidda cabitaanno fara badan oo biyo ah waa farsamo weyn si ay uga caawiyaan ilkaha sii cad. Cabitaanka biyaha ku salaysan soo noqnoqda caawin doonaa ka sameynta sii Wasaqda iyo ilkaha oo immika ku maydhin ku dhawri doontaa.
Waxaa laga yaabaa inaad u baahan tahay in la sameeyo this dhowr jeer si aad u hesho ilkaha u muuqata mid aad u wasakheeyey.
Cabitaanka iyada oo kale caws buu u yareeyo kartaa xayd ilig ka sharaabka. caws engegan oo kale wuxuu ka caawiyaa yaraynta waqtiga sharaabka leeyahay inuu jebiyo ilkaha. dareeraha ah ayaa si toos ah hoos cunaha aado halkii ay xiriir la sameeyeen ilkaha.
TALO! xirfadeed A ilkaha ka heli kartaa natiijada tayo ka badan marka aad isticmaasho ka badan waxyaabaha miiska. Qaabkan ilkaha more caddeeyo kharashka, laakiin natiijada waa deg deg ah.
Dhakhtarka ilkaha waxaa laga yaabaa inay awoodaan inay ku siiyaan talo ku saabsan oo ka dhacay guriga xirmooyinka caddeeyo waa wax ku ool ah oo aan wax yeesho ilkahaaga ama ciridkaaga.
Sii kor sigaarka wanaag. Inkastoo sigaarka ayaa lagu yaqaan in ay u xun tahay caafimaadka guud, sidoo kale waa u xun tahay ilkaha. Dhab ahaan, mid ka mid ah Calaamadaha ugu cad in qof sigaar waa ilkahoodu ay huruud. Waxay noqon kartaa adag si ay u sii ilkaha cad halka sigaarka. Joojinta sigaarku waa mid aad u adag, laakiin sigaar kasta oo aad ka fogaato yarayn doono saamaynta on ilkaha.
TALO! Gadashada cadayga korontada waa hab fiican si aad u hesho ilkaha caddaan. cadayga Electronic caawin saar Wasaqda cuntada, khamriga iyo tubaakada oo dheeraad ah si fiican ka caday Buugga.
Caday ilkaha joogto ah haddii aad leedahay smile.Food weyn iyo waxyaabo kale oo ku dhisi kartaa on ilkaha iyo discolor ama u jebiyo muddo ka dib. Ma aha in aad u leeyihiin in ay la walaacsan la midab inta aad si joogto ah u cadaydo ilkahaaga.
La soco dareen kasta oo aad ilkaha iyo ciridka marka la isticmaalayo cadeyga caddeeyo ama strips guriga. Haddii ay taasi ma dhici, raadiyo waxyaabaha aan lahayn haydarojiin sida ugu badan iyaga oo ku. Sida caadiga ah, kuwaas oo waxyeelo yar baabi'i doontaa maalmo yar ka dib waxaad bilowday isticmaalka sheyga.
TALO! Ogow sida ugu wanaagsan ee ilkaha doortay caddeeyo sameysay hab. laga yaabaa in niyad haddii aad ka filan in ka badan habka caddeeyo a uu samatabbixin karo.
Isku day cadayashada ilkaha la juice strawberry qaar ka mid ah. Tani waa hab cadaalad ah oo raqiis ah si aad u hesho dhoola aad mar walba rabay.
dhaldhalaalka Tooth ka kooban yahay walxaha macdanta awoodaan si looga hortago cudurada of xididada iyo khataro kale waxyeelo u geysan kara ilkaha. kiimikooyinka qaarkood in waxyaabaha la caddeeyo, ay ka mid yihiin acids xoog, dhaawici kartaa dhaldhalaalka iyo waxay keeni saamaynta kale negative.
TALO! Waa fikrad khaldan baahsan in isticmaalka liin iyo juice lime jira habab u wanaagsan in aad ilkaha dhalaal, laakiin tani kaliya ma aha kiiska. Tani ma aha sax ah sida halka ay ilkaha u caddayn karin xoogaa, waxay khatar ah iyo sidoo.
Haddii xawaaraha iyo waxtarka yihiin ahmiyadaha ugu ilko-caddeeyo, waa inaad isla markiiba soo booqan dhakhtarkaaga. Caddeeyo ilkahaaga ma aha had iyo jeer ah ballanqaad la isku qurxiyo fudud. Aan arkaya dhakhtarka ilkaha, waxaad halis dhaawac oo aad ilkaha iyo caafimaadka afka guud muddo.
Hubi in aad si joogto ah u nadiifin. aad bay u findhicilashada sahasha in saarista huurada oo, markeeda, caawin hortagi karaa xayd ilkahaaga. Hel in caado ka floss maalin kasta oo lagu qaado qaar ka mid ah si aad u isticmaasho cunto kasta ka dib. U hubso in aad ilkaha dhexdooda ka hor wakhtiga jiifka ma si laguu ogolaado in aad bakteeriyada inay ku sii on ilkaha habeenkii oo dhan.
TALO! Isku day cunista cuntooyinka crunchier. Ilkaha noqon kartaa dheeraad ah oo cad ka celery cunaya, tufaax iyo karootada.
Caddeeyo qalimaan ilkaha waxay noqon kartaa hab weyn oo ay ku caddeeya aanu u caddayn ilkaha. Iska ilaali saamaynta gel marka aad isticmaalayso jel waayo, iyagu waa inay ka dhigan bleach a. Waxaad si ay u isticmaalaan taxaddar leh habkan iyo in la hubiyo ha idiin sameeyo sidoo kale marar badan.
Isku qas liin iyo cusbo miiska alaabta a caddeeyo oo macmal ah. Ka dhig ey isku shaabadeeyey weel, iyo u isticmaali muddo la walwal yar oo ku saabsan kharribaad.
TALO! whiteners Ilkaha waa in aan marnaba loo isticmaali ilaa aad la tashaday dhakhtarkaaga ilkaha. Waxaad ka heli laga yaabaa in aad u baahan caddaanka dhalaalayay oo dhammuna waxay ahayd nadiifinta wanaagsan.
cadayga korontada ah waa ka wanaagsan yahay hab fiican si iftiimin dhoolla. cadayga ilkaha Electric nadiif ah iyo sidoo kale waxaa inta badan loo isticmaalaa si loo soo saaro discolorations maqaar saar ah ee teeth.They nadiifi off midab huruud ah wax ka bedka ilkaha ah.
Ka dheerow shaaha iyo kafeega iska si looga hortago xayd ilkaha. cabitaanka Kuwani discolor ilkaha marka aad iyaga ka dhan ka waraabisay.
TALO! Ka dib markii cuntada xanjo in ilkaha sii cad oo daahir ah. Waxaa jira dad badan oo ay ku jiraan ciridka wakiilada caddeeyo oo si tartiib ah Doono discolorations qaab.
Ha lagu siri by cadeyga oo waxaa lagu xayeysiiyaa sida ilko caddeeyo. Waxaa laga yaabaa inay ku caawiyaan in ay u caddayn ilkaha, laakiin waxaad u baahan doontaa inaad ku isticmaasho lala hab kale. Haddii aad rabto in la caddeeyo cadayga, ku adkeyso on mid ka mid ah ay ku jiraan baking soda.
Waxaad isku dayi karaa cadayashada ilkaha isticmaalaya diirka ee moos. Dad badan waxay helaan trick fudud in ay noqon arrin wax ku ool ah. Xoq gudaha ee diirka muuska ah ka gaartay ilkaha si aad u caddeeya aanu u caddayn. Markaasuu, raac la cadayashada joogto ah. Natiijada caddeeyo waxay noqon doontaa sida muuqata isla markiiba.
TALO! Search for ilko caddeeyo waxyaabaha aad yard halkii farmashiye ah. jilif ee geed walnut waa si fiican u yaqaan for baabi'inta Wasaqda ka ilkaha.
ilkaha si toos ah caday kadib kor, iyo sida ugu dhaqsaha badan aad rabto in aad sariirta aado si aad u aragto ilkaha heli caddaan.
Hubi in marnaba isticmaali ilkaha ah caddeeyo nidaamka haddii aad ku jirto marxalad kasta ee uurka ama naas. hooyooyinka uurka leh iyo xanaanada leeyihiin ciridka oo aad u xasaasi ah. Intaa waxaa dheer, kiimikooyin laga helo cuntooyinkan noqon kartaa dhibaato. Halkii, kaliya aad dhoola dhalaalaya leh cadayashada wanaagsan oo caadi ah floss waqtigaan khaaska ah. Waxaad had iyo jeer dooran karaan in ay ilkaha Nuuro ka dib markii aad uurka leh ama nuujinaya mar waa dhameystiran.
Ogow waxa ay ka sugayaan ilkaha caddeeyo habka la doonayo inuu kuu sameeyo. Waxaad soo afjari karo waayo niyad jab haddii laga filayo waa mid aad u sareeya. Weydii dhakhtarka ilkaha waxa ay ka sugayaan.
dhaldhalaalka Tooth ilaaliyaa ilkaha ka cudurada of xididada iyo khataro kale waxyeelo u geysan kara ilkaha. Products ay ku jiraan aysidhka sare ama kiimiko kale oo sun ah in ilkaha la dhaawac karo in ka badan waxa ay ka caawin doontaa.
Helitaanka ilkaha cad aad rabto in aad noqon karaan kuwo qaali ah iyo xoogaa of gumaarka ah. qalab iyo habab badan yihiin waxaa kaa caawinaya in aad hesho ilkaha caddaan. By codsanaya talooyinkan, waxaad heli kartaa ilkaha caddaan doonaa iyadoo aan wax lacag aad lacag on xal xirfadeed.
Posted by Guide Ilkaha caddeeya aanu u caddayn - June 5, 2016 at 12:39 AM
Categories: Home ku saleysan in Ilkaha caddeeya aanu u caddayn Tags: saar midab, Saar Uskag Ilkaha, Uskag Ilkaha